ပုံနှိပ်ညွှန်ကြားချက်များ – အဆိုပါ Tailoress
သင့်ရဲ့ copyshop PDF ကိုပုံနှိပ်:
1. Adobe Reader ၏နောက်ဆုံး version ကို Download လုပ်:
2. Adobe Reader ထဲမှာပုံစံကို PDF ကိုဖွင့်.
3. ပုံနှိပ်ကို Select လုပ်ပါ. စာမကျြနှာအရွယ်အစားနှင့်လက်ကိုင် '' လက်အောက်တွင်’ '' ပိုစတာ '' ကိုရွေးချယ်ပါ. ပိုစတာ 'အောက်ကပုံးလည်းစစ်ဆေး’ '' မာကုကိုဖြတ်ဘို့’ နဲ့ 'Labels' '. ထိုသို့ပုံနှိပ်ပေးတဲ့ dialog box ရဲ့ညာဘက် print ထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သင်သည်သင်၏ပုံစံအစမ်းကြည့်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်
4. '' 's Page Setup ကိုနှိပ်ပါ’ သင်၏ပရင်တာစက္ကူအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်ဖက်ထောင့်ရှိ.
6. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အစာမကျြနှာ margin တွေကိုချုံ့နှင့်စာမကျြနှာကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. တစ်ခုချင်းစီကိုစာမကျြနှာကိုပူးတွဲတရားတို့ကို i.e ရှိသည်လိမ့်မယ်. (1,3). ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်ကော်လံအရေအတွက်နှင့်ဒုတိယသင်ကော်လံပေါ်မှာနေရာချထားကိုပြောပြသငျသညျကိုပြောတယ်.
သင်အသုံးပြုနေသောကိုမဆို PDF ကိုကြည့်ရှုသူမှ print ထုတ်ကို Select လုပ်ပါ. ရန်ပုံနှိပ် settings တွေကိုသတ်မှတ်ထားဖို့သေချာ “100%”, “FULLSCALE” သို့မဟုတ် “ACTUAL” အစာမကျြနှာအရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲမှသင်၏ကြည့်ရှုသူကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အရွယ်အစား.
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်